Håkan Larsson /”अयस्क गुण”: को माइग्रेसन बोर्ड झूटो कागजात, इन्डेन्ट फा-कर र नयाँ कम्पनी को नाम | Holmbygden.se
Håkan Larsson /”अयस्क गुण”: को माइग्रेसन बोर्ड झूटो कागजात, इन्डेन्ट फा-कर र नयाँ कम्पनी को नाम
पोस्ट 28 नोभेम्बर, 2015 द्वारा Holmbygden.se
यसलाई अब Stendahls skandalhus मा शरणार्थी प्राप्त गर्न कुनै पनि समय प्राप्त गर्न ज्वर को दशा में तयार छ. घोटाले बढ्दै र गर्दा अनियमितताहरु नयाँ मालिक मा जारी हुनेछ ओरेब्रो देखि Håkan Larsson, अब एजेन्ट मिलेर Stendahs. जोहान नई stendahl लिङ्क को खंडन प्रकट पछि स्विडिश टेलिभिजन समाचार Västernorrland, यसलाई अब धेरै नयाँ शङ्का उभर:
झूटा प्रमाणपत्र माइग्रेसन बोर्ड गर्न अनुरोध पठाईएको.
फेरि, स्वामित्व परिवर्तन नाम.
इन्डेन्ट फा-कर Håkan Larsson कम्पनीहरु.
स्थानीय खेल क्लब संग सम्पर्क लिइरहेको बारेमा झूट.
शरण आवास को लागि अनुमति / निर्माण को अनुमति योजना बिना.
को माइग्रेसन बोर्ड नक्कली प्रमाणपत्र अनुरोध
Håkan Larsson र जोहान नई stendahl कानुनी सल्लाह वकील माइकल Sterner झूटा वेंटिलेशन प्रमाणपत्र गुण को म Anundgård आफ्नो बोलपत्रहरू मा माइग्रेसन बोर्ड अनुमोदन प्राप्त गर्न पेश. वेंटिलेशन नियन्त्रण कम्पनी बाट आएका छन् फा कर बिना र निरीक्षण लागि accreditation बिना. फिक्री आवास गुण पनि पनि कथित प्रोटोकल inspected जो आफ्नो अपार्टमेन्ट मा भएको कहिल्यै कुनै पनि निरीक्षक पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ.
माइकल Sterner रूपमा पनि नई stendahl जस्तै थियो 2013 पनि त भवन लागि झूटो कागजात पेश गर्दा माइग्रेसन बोर्ड सुरक्षाको आगो. यो त उद्धार Medelpad रूपमा थियो झूट कि एकदम स्पष्ट.
फेरि, स्वामित्व परिवर्तन नाम – छैन “अयस्क गुण”
बस शरण आवास को खरीद लागि समय मा 2013 स्विच “नई stendahl skandalhus” कागज मा एउटा नयाँ मालिक “भाडामा” कम्पनीहरु – Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा जोहान नई stendahl एक जानकारी स्वामित्वमा. त्यस्तै, यो अन्तिम जाडो हुँदा नई stendahl अर्को परिचय, Håkan Larsson गुण किनेको. तथापि, Håkan Larsson लिए, जबकि एकमात्र निर्देशक रूपमा जोहान Stendahls कानुनी प्रतिनिधि संग Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा.
अब, तर Håkan Larsson Bilkonsult अटल बिहारी अयस्क Fastigheter अटल बिहारी देखि पुन: नामाकरण,. यदि कारण छ नई stendahl गर्न Håkan Larssons जडानहरू खोल अस्पष्ट.
इन्डेन्ट फा कर
क्रेडिट इतिहास को मात्रा पछि, दायित्व र जवाफदेहीता कमी अब Skatteverket फा-कर Håkan Larsson कम्पनी Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा मा ल्याएको छ. हुनत यो बोर्ड मा बस्छन जो जोहान Stendahls वकील माइकल Sterner छ.
टीरक Det, जोहान नई stendahl गर्न अध्यागमन सेवा सबै अघिल्लो अस्वीकृतिहरु र जडानहरू, दोषी स्वीडिश राज्य एक अर्ब को एक चौथाई, ओरेब्रो देखि Håkan Larsson Bilkonsult प्राप्त स्वीडिश माइग्रेसन बोर्ड र खुला शरण आवास घोटाले घरहरू एउटा सम्झौता हस्ताक्षर.
स्थानीय खेल क्लब संग सम्पर्क लिइरहेको बारेमा झूट
Håkan Larsson Holm यसको जरा वर्णन गर्दा त्यो स्थानीय खेल क्लब संग सम्पर्क गरे भनेर लेखे. यो Holm Sportklubb द्वारा contradicted छ, को कुनै पनि कुनै पनि आश्रय आवास बारेमा सम्पर्कमा भएको हुँदा. न त गाउँलेले वा छोटो बैठक गर्न कुराकानी कुनै पनि जानकारी संगठित छन्.
बिना योजना अनुमति / निर्माण को अनुमति
यसलाई आफ्नो गुण मा शरण आवास को कार्यका लागि कुनै भवन अनुमति छ. सामान्यतया एउटा भवन प्रयोग को परिवर्तन मा योजना अनुमति वा भवन आवेदन आवश्यक, तपाईंले एक गतिविधिबाट अर्को जाने बेला छ, छ.
तिनीहरूले थाहा छैन अरूले गतिविधिहरूको लागि भवन विनियम को आवश्यकताहरू पूरा साथ सँगै बाँच्न शरणार्थी आवास.